Tabera Randriamanantsoa : Te hitondra firenena mafy nefa tsy afaka -
AccueilSongandinaTabera Randriamanantsoa : Te hitondra firenena mafy nefa tsy afaka
31/03/2017 admintriatra Songandina 0
Mirefarefa amin’ny tany ny fomba fisainana. Izay no azo andikana ny fomban’ny mpitarika ny Kaonfederasion’ny federalisma (Cnef), Tabera Randriamanantsoa. Toa mivazavaza tsy amin’ny antony ary tsy hampandroso firenena akory ny tanjony. Toa ny hampikorontana ny tany sy firenena indray aza no ataon’ity mpanara-dia ny Pr Zafy Albert ity.
Raha ny nambarany mantsy, tokony hovaina ny Lalàm-panorenana misy sy miasa eto amintsika amin’izao fotoana izao vao miroso amin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena. Inona moa no tanjona amin’ny fikitihina ny Lalàm-panorenana? Tsy vao mainka àry ve izany hiteraka korontana. Teo amin’ny fitondrana Ingahy Tabera Randriamanantsoa, tsy akory izay fanovana sy fampivoarana ny firenena nentiny. Ankehitriny, mitabataba etsy sy eroa fa ny “fananganana ny rafitra federaly no tena mampandroso”. Inona no tsy nitondrany izany teo amin’ny filan-kevitry ny minisitra sy ny filan-kevitry ny governemanta fony izy minisitra tamin’ny fotoan’androny? Araka izany, tsy anjaran’i Tabera Randriamanantsoa velively ny hikitika sy hanova ny Lalàm-panorenana sy hanangana izao komity na vaomiera hamolavola izany.
Hita ary voaporofo izao fa mitady seza i Tabera Randriamanantsoa ka mitady hirika hatramin’ny farany mba hidirana eo anivon’ny governemanta. Zary lasa miteniteny foana sisa ity minisitry ny Asam-panjakana teo aloha ity. Raha ny filazany mantsy dia tsy tokony hivangongo amina olona iray ny vola. Tsy tsapan’ity mpanara-dia ny Pr Zafy Albert ity angamba ny fisian’ny CLD, izay miparitaka eny anivon’ny kaominina manerana ny Nosy.
Tsy adala akory ny Fanjakana ka tsy hahalala ny tokony ataony amin’ny fampandrosoana ny firenena sy ny ady atao amin’ny fahantrana. Profo mitohoka amin’ny tenda ny fahitan’ny Fitondram-panjakana mpiara-miombon’antoka vahiny marobe sy mpamatsy vola ary mpampiasa vola eto Madagasikara.
Mbola tsy nisy hatramin’ izao ny fangatahana notanterahin’ ireo solombavambahoaka mpanohitra izay mikasa hanatanteraka hetsika ny sabotsy ho avy izao etsy amin’ ny lapan’ny tanàna raha ny tatitry ny préfen’ ny tanànan’Antananarivo taorian’ ny fivoriana ...Tohiny